Wararka Maanta: Axad, Oct 24, 2021-Ciyaaryahan Mo Salah oo saddex rikoor jabiyay maanta
1. Wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay oo Liverpool ka tirsan oo 10 kulan oo isku xigo goolal u dhaliyo kooxdiisa, wuxuuna xilligaan dhaliyay 15 gool 12 kulan oo uu saftay.
2. Sidoo kale Salah wuxuu hadda noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan Afrika ee taariikhda Premier League, isagoona rikoorkaas ka qaaday ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea, Didier Drogba oo horay u haystay.
3. Mo Salah maanta wuxuu noqday ku dhawaad 20 sano - ciyaaryahankii ugu horeeyay oo hat-trick ama Saddex gool ka dhaliyo Garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United.
Ciyaaryahankii ugu dambeyay ee Saddexleey ka dhalliyay Garoonkaas wuxuu ahaa Ronaldo oo ciyaar ka tirsaneyd UEFA Champions League oo dhacday 23-April-2003-dii, saddex gool ku dhalliyay Garoonka Old Trafford.
Laakiin ciyaaryahankii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska ciyaar ka tirsan saddexleey Old Trafford ku dhalliyo wuxuu ahaa Dennis Bailey oo Queens Park Rangers (QPR) u ciyaari jiray oo bishii Janaayo 1992-dii, seddexleey ka dhaliyay Man United ciyaar ku dhammaatay 4–1 oo QPR ay ku badisay. muddadaas hadda waxaa laga joogaa ku dhawaad 30 sanno.
Dhanka kale #Ciyaar lama dhihi karo wixii maanta ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Manchester United oo Liverpool ay Shan Gool iyo Ebar oga badisay.
Dad badan waxay eeda ciyaartaas dusha ka saareen tababaraha rajadiisa kooxda ay xun tahay ee Ole Gunnar Solskjaer balse sida warbaahinta Ingiriiska qaarkood ay qoreen, khaladaadka ugu badan wuxuu ka yimid dhanka difaaca kooxda Manchester United gaar ahaan Harry Maguire iyo Luke Shaw oo ciyaarta daawadayaal ka ahaa xilliga uu Mo Salah “Hat trick” ama saddexleyda isku xigto uu dhalinaayay iyo waliba 14-kii daqiiqo ee ciyaarta ogu horeysay oo labo gool laga dhaliyay kooxdooda.
Xilli ciyaareedkaan waa markii ugu horeysay oo sidaas loo bahdilo Man United ama 4 gool iyo Ebar lagu mariyo wakhtiga nasashada, kadibna ay iska soo gudi waayeen.
Labadaan koox ee Manchester United iyo Liverpool waxaa muddo dheer ka dhaxeeyay xafiiltan adag oo xitaa ciyaartooyda makala iibsadaan iska daa in ay deyn isku siiyaanee.
Marka ma ahan labo koox oo laga sugaayo iney isxaan isku falaan.